जति कडा नीति त्यति बढ्दो दुर्घटना, भक्तपुरमा कारको ठक्करले मोटरसाइकल चालकको मृत्यु ! - PUBLICAAWAJ
प्रकाशित : सोमबार, चैत २५, २०७५१३:३४ पब्लिक आवाज / संवाददाता , अम्बिका
काठमाडौँ, प्रत्येक दिन हामी कुनै न कुनै स्थाममा सवारी दुर्घटनाको समाचार सुनी नै रहेका हुन्छौँ । बढ्दो नीति नियमको साथ दुर्घटना पनि बढ्दो नै रहेको छ ।
आज फेरी अरनिको राजमार्गअन्तर्गत सूर्यविनायक नगरपालिका–१० भातेढिकुरमा कार र मोटरसाइकल बीच दुर्घटना भएको छ । जगातीबाट बनेपातर्फ जाँदै गरेको मोटरसाइकललाई विपरीत दिशाबाट आउँदै गरेको कारले ठक्कर दिँदा मोटरसाइकल चालकको मृत्यु भएको छ ।
आईतबार दिउँसो बा१९प ५०८९ नम्बरको कारले बा४९प ५४२७ नम्बरको मोटरसाइकललाई ठक्कर दिँदा उक्त दुर्घटना भएको हो । यस दुर्घटनामा काभ्रे बेथानचोक गाउँपालिका–६ का ३४ वर्षीय मोटरसाइकल चालक दीपेन्द्र लामाको मृत्यु भएको छ ।
यस बारे महानगरीय प्रहरी परिसर भक्तपुरका प्रहरी नायब उपरीक्षक रेवतीरमण पोखरेलले जानकारी दिएका छन् । दुर्घटनाको क्रममा मोटरसाइकल चालक र पछाडी बसेका काठमाडौं महानगरपालिका–३० बस्ने ३९ वर्षीय पञ्च खड्गी घाइते भएका थिए ।
घाइते लामाको मध्यपुर अस्पताल ठिमीमा उपचारका क्रममा आइतबार साँझ मृत्यु भएको हो । घाइते खड्गीको भने अस्पतालमा उपचार भैरहेको छ ।
तनहुँको आँबुखैरेनीमा खरको छाना भएको घरमा आगलागी हुँदा साढे सात लाख क्षति
समाजसेवाबारे मिडियावाजी परिपाटी माथि नायिका स्वेता खड्काको दह्रो झापड, नमुना माझी बस्ती तैयार भैसक्दा पनि कसैलाई पत्तै छैन !
युवतीलाई यातना दिएको भिडियो बाहिरीए संगै ‘धर्ती माता’ !
मानव अधिकार उल्लङ्घन गर्ने दुई सय ६८ जनाको नामावली सार्वजनिक